आफूलाई व्यक्त गर्न एक तरिका रूपमा टाटु अविश्वसनीय आजको संसारमा लोकप्रिय छन्। तीव्र चासो पैदा तिनीहरूले जो उहाँले breathes मिडिया, को चासो शरीर र बिन्दु को देखिने भाग लागू गर्दै छन्, र उसलाई चिन्ता। एक व्यक्तिको जीवनमा महत्त्वपूर्ण घटनाहरू तथ्याङ्कले वा inscriptions प्रतिबिम्बित गर्दै हुनुहुन्छ।
छविको व्यक्तिगत अनुभव गर्न सम्बन्धित अक्सर ठाँउ, लुकेको वस्त्र लागू गरिएको छ। धेरै आवश्यक छैन लुकेका अर्थ बोकेको, आफ्नो शरीर "अनन्त" तथ्याङ्कले ढाक्न एक योजना एक वा दुई टैटू मा रोक्न छैन।
छलफल गरिने केटी, रेकर्ड को गिनीज बुक मा सम्पूर्ण विश्व मा सबै भन्दा टाटु स्त्रीको रूपमा सूचीकृत गरिएको छ।
porphyria के हो?
जूलिया Gnuse (जूलिया Gnuse) बदनाम बन्न छैन जाँदै छ, यो कुनै पनि लागत मा ख्याति लागि कुनै व्यर्थमा इच्छा थियो। संसारको रेकर्ड मालिक 1959 मा जन्म भएको थियो मिशिगन (संयुक्त राज्य अमेरिका)। 30 वर्ष पछि यो गम्भीर रोग overtaken छ - porphyria।
वैज्ञानिकहरूले यो एक दुर्लभ आनुवंशिक रोग हेमोग्लोबिन को प्रजनन भङ्ग छ जो विचार। संचित विषाक्त पदार्थ भनिन्छ porphyrin को शरीर मा मानव छाला असर गर्छ। यो एक रातो-खैरो रंग प्राप्त र प्रकाश मा bursting, सूर्य गर्न अत्यन्तै संवेदनशील हुन्छ।
प्लास्टिक सर्जन बोर्ड
स्थिर सास्ती बस्ने जूलिया Gnuse प्लास्टिक सर्जन गर्न बन्द, त्यसैले तिनीहरू उनको पूर्व उपस्थिति फर्के। एक निराशाजनक स्त्रीको छाला गैर-निको अल्सर र कुरूप scars ढाकिएको भन्ने तथ्यलाई। विशेषज्ञहरु दुर्भाग्यपूर्ण मदत गर्न सक्छ, तर सल्लाह दिए - mottled अनियमितताहरु शरीर टैटू सजाउनु, रोग गर्न कुरूप चिह्नों छैन त सजिलै देखिने थिए।
डाक्टर र कालो छाला को अस्वाभाविक रंग मिलाउनका लागि छवि लागू गर्न सल्लाह हुनत, एक महिला एक रंग निर्णय, यसको आफ्नै तरिकामा आए आफ्नो खुट्टा मा टाटु। पहिलो परिणाम यति खुसी जूलिया Gnuse उनको खुसी गर्न प्रयोग बारम्बार निर्णय उनको छ। सुन्दर उज्ज्वल रेखाचित्र पूर्ण समस्या धेरै ल्याएको भयानक scars लुकाउनु भएको थियो।
एक बिन्दुमा, जुलिया, दूर, म त्यो sores प्रभावित छैन गरिएका निकायको ती भागहरु सजाउनु चाहन्थे भनेर बुझे लगे गोदना। अब त्यो लगभग सबै शरीर, उनको रंगीन रेखाचित्र बन्द र सजावट आफ्नो निर्भरता स्वीकार।
जूलिया Gnuse: पहिले र पछि (फोटो)
जुलिया एक भयानक रोग को exacerbation समयमा लिएको फोटो विचार गर्न चाहनुहुन्छ छैन। कोमल महिला छाला, घाम संग bursting, उनको धेरै शारीरिक र नैतिक दुःख दिए। तर अब त्यो खुसीको कुरा क्यामेरा लागि, अब परिसर र अन्तमा आफूलाई प्रेम गरे भन्दै poses। त्यो भनेर उनको छाला disfiguring scars गायब छैन थाह, तर तिनीहरू जो कम से कम उनको शरीर मा चार रंग टैटू एक प्रशस्त अन्तर्गत देखिने छैन।
त्यो आफु भन्नुहुन्छ कि पहिले र शरीर मा ढाँचाको आवेदन पछि जूलिया लामखुट्टे - पूर्ण फरक मान्छे। विगतमा उहाँले जीवित देखि उनको रोक्न सबै परिसर संग लजालु र असुरक्षित महिला रह्यो। अब जूलिया 10 अधिक वर्ष को लागि टाटु पार्लर दौरा गर्ने बलियो र ऊर्जावान महिला भएको छ। त्यो रंगीन रेखाचित्र र मजा घटनाहरू मा तस्वीर लिइरहेको लुक्ने छैन। लोकप्रियता खोजिरहेका बिना तथापि, महिला अन्तर्राष्ट्रिय ख्याति प्राप्त भएको छ।
जो, धेरै, जुलिया Gnuse भङ्ग गर्न रोग लागि मूर्ति आफ्नो टैटू बारेमा कुरा गर्न खुसी भएको छ। त्यो नै मास्टर जान्छ र त्यो उनको शरीर सजाउनु, एउटा वास्तविक व्यावसायिक थियो भन्दै, यसलाई परिवर्तन गर्न जाँदै छ।
The Simpsons "" मेरो हात बाट खरायो र हास्यास्पद वर्ण पिन को औंलाहरु मा "। जहाँ छाला rotted छ ती ठाउँमा, म यसलाई कालो ढाँचा रंग। अब म छवि लियोनार्डो डि Kaprio र माइकल ज्याक्सन, धेरै फूल चित्रहरु flaunt, आफ्नो मनपर्ने कार्टून को कुकुर, "- एक मजबूत-इरादों महिला भन्छन्।
त्यो यो उनको टैटू को सबै सूची असम्भव छ, grins, त्यसैले अक्सर वस्त्र अन्तर्गत लुकेको छ के प्रकट गर्ने, उजागर। फोटो उनको तस्वीर शब्दहरू भन्दा राम्रो भरी बारेमा बताएको जूलिया midges, म दस वर्ष पहिले, यो उनको लागि थियो, अब त्यो घामको आनन्द उठाउन सक्छौं खुसी छु असम्भव सपना।
अभिनेत्री Mashnaya ओल्गा Vladimirovna: एक जीवनी, व्यक्तिगत जीवन। सबैभन्दा चलचित्र र टिभी श्रृंखला
सोभियत लेखक Braginskiy Emil Veniaminovich: जीवनी र रचनात्मकता
गिल्बर्ट Gottfried: जीवनी, पुरस्कार, पूर्ण Filmography
ARSEN Markarian: जीवनी र फोटो
Davydov Mihail Mihaylovich, ऑन्कोलॉजिस्ट: एक जीवनी र फोटो
घर मा बाल decolorized? सबैभन्दा प्रभावकारी तरिका
पावलले Yablochkov: संक्षिप्त जीवनी, फोटो, आविष्कार। Yablochkov पावेल Nikolayevich खोल्दै
"हर्कुलेसक्लस्टर" - सबै अवसरका लागि एक ड्राई मिश्रण
बच्चाहरु मा रिश
शुभकामना, आफ्नै शब्दमा मान्छे मा शुभ रात्री
तपाईं दबाइ "Geksoral" एनालग छ? बच्चाहरु र वयस्क लागि सस्तो र प्रभावकारी analogs "Gesorala"
Begonia vechnotsvetuschaya - माली लागि वरदान
आईफोनहरु (iPhone) गुमाएका कसरी पाउन?
संग्रहालय वी आई Chapaeva को - नायक र आफ्नो कामहरू को जीवित इतिहास, posterity लागि सुरक्षित